Ukusebenziseka Kokusesha Okukhokhelwe: Isibonelo Sokuhamba Nezokuvakasha | Martech Zone
Ukusebenziseka Kokusesha Okukhokhelwayo: Isibonelo Sokuhamba Nezokuvakasha
Uma ufuna usizo noma ubuchwepheshe bokucinga obukhokhelwayo, insiza enkulu lapho ikhona Iqhawe le-PPC, incwadi enhle lapho iHanapin Marketing yabelana ngobuchwepheshe bayo. UHanapin usanda kukhipha le infographic emnandi, i- Izeluleko Eziphezulu Eziyishumi ze-PPC Zezindawo Zokuhamba Nezokuvakasha. Ngenkathi icala lokusetshenziswa kungukuhamba nezokuvakasha, lawa macebiso alungele noma yikuphi ukumaketha okufuna ukufaka indlela yokukhokhela yokusesha ekhokhelwayo kumasu abo e-PPC (Pay Per Click).
Njengoba kunabahambi abangama-65% bezokungcebeleka no-69% wabahambi bezebhizinisi abathi babuyela kuwebhu ukunquma ukuthi bafuna ukuhamba kuphi noma kuphi, iHanapin Marketing icabange ukuthi i-infographic enhle enezeluleko ezisebenzayo ingaba ngumthombo omkhulu nomhlahlandlela wakho konke ukuhamba nezokuvakasha abathengisi.
Nawa amathiphu aphezulu wokuSebenzisa okuSetshenziswayo anikeziwe
Zihlukanise - Yenza ucwaningo ku imikhankaso ye-PPC yabancintisana futhi uhlukanise imikhankaso yakho yezikhangiso.
Imikhankaso eguquguqukayo - Iziphi izindawo izilaleli zakho ezingafuna zona? Nikeza imikhankaso eminingi yokuhlola nokushintsha okunikezayo.
I-Geo-Target - Cacisa izindawo ezifundeni ezisebenzayo, ngaphandle kwalokho uchitha isabelomali sakho sokukhangisa esikhokhelwayo.
Target by Day and Hour - Ukuqinisekisa ukuthi iminikelo yakho iyabonakala lapho amathemba ebukeka kubo angaba nokwenyuka okukhulu kwamazinga wokuchofoza ukuze uguqulwe.
Lungiselela i-ROI - Ukuthola isiminyaminya esikhulu kungaba kuhle kepha akukhokhi izikweletu. Hlaziya bese ugxila kwimikhankaso eshayela imali engenayo, hhayi nje ithrafikhi.
Amasu Okubhida - Dala amasu okubhida ngokususelwa kuzinhloso zomkhankaso wakho. Ukuqwashisa, ukwabelana, ithrafikhi nokuguqulwa konke kubalulekile, kepha ukusebenzisa imali eningi ekuguqulweni kunengqondo kakhulu kunokuthenga ithrafikhi ngamabhidi aphakeme kakhulu.
Lungiselela imikhankaso yokubonisa - Bheka ukubekwa kwezikhangiso futhi ulungiselele indawo yokubuka esikhundleni sokusebenzisa usayizi owodwa olingana lonke isu.
Ukumaketha kabusha - Wonke amasu e-PPC kumele abe necebo lokumaketha kabusha! Ukuqondisa izivakashi ebezikusayithi lakho futhi zashiya kuzokwenzeka ngokuphelele khuphula izinga lokuguqulwa.
Sebenzisa i-Bing - I-69% yabahambi bezebhizinisi baphendukela kuwebhu ukuthola amalungiselelo ohambo kanti i-71% yethrafikhi ku-Bing ingeye-Bing kuphela (hhayi kuGoogle).
Lungiselela amakhasi okufika - Amakhasi amakhulu okufika awagcini ngokwandisa ukuguqulwa, futhi aholela kuzikolo zekhwalithi ezinhle ezithuthukisa ukubekwa kwesikhangiso sakho. Lungiselela amakhasi akho okufika!
Tags: ukumaketha kwe-hanapinukusesha okukhokhelweukumaketha kosesho okukhokhelweukhokha ngokuchofoza ngokukodwabhabhappcukumaketha kwe-ppcphumziukumaketha kwenjiniEzokuvakashatravel